Wacaal Darray ah
Odoros dheer iyo aqoon warbaahineed oo dhammaystiran; Dhegayso Caawa iyo Daljir. 10:00 Cawaysnimo xiliga geeska Afrika;
Dhegayso barnaamijka Saaka iyo Dunida subax 06:15am\_r\_n Daljir Headline English News
Radio Daljir ka dhagayso oo kala-soco wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, booqo www.daljir.com oo ka qayb-gal falceliska bulshada, ku biir oo ka mid noqo kummaanka qof ee baraha bulshada Daljir la s
Sawirro-Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhoweeyey madaxtooyada Kenya.	Madaxtooyadda Kenya waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha DF Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaana soo dhaweyntiisa ka qeyb galay madaxweynaha Kenya iyo ku xigeenkiisa.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Faadumo Abuukar.	Boosaaso, Mar 23 2017-Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii xulashada Daljir ee Maanta waxaana barnaamijka xarunat Daljir ee Magaalada Boosaaso kasoo jeedinaysa Faadumo Abuukar Xulashada Daljir wa
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Tallman.	Boosaaso, Mar 23 2017-Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida oo aad subax walba ka maqashaan xarumaha Daljir ay kuleedahay Soomaaliya, waxaana xarunta Daljir Boosaaso k
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Axmed Sh Maxamed Tall man.	Boosaaso, Mar 23 2017-Halkaan ka dhagayso barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir, waxaa barnaamijku caawa idinkaga imaanayaa magaalada Boosaaso waxaana idinla socodsiinaya wariye Axmed Shiikh Maxamed DHEGEYSO-Madaxweynaha Puntland oo dalka ku soo laabtay iyo mashaariic la bilaabayo.	Garoowe, Mar 22 2017-Madaxweynaha dowldda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Garaowe ee caasimadda Puntland, kadib markii uu soo gabagabeeyay socdaalkiisii dibada.
Waa kuma ra'iisul wasaare ku-xigeenka magacaaban ee Soomaaliya.	Mudane Avv Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) waa Aabe leh xaas iyo 7 caruur ah. Waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sannadkii 1973, waxbarashadiisii hoose, dhexe, iyo Sare waxa uu ku soo qaatay magaalada Wacaal
Sawirro-Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhoweeyey madaxtooyada Kenya.
Madaxtooyadda Kenya waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha DF Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaana soo dhaweyntiisa ka qeyb galay madaxweynaha Kenya iyo ku xigeenkiisa.
Warkii oo dhan
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Faadumo Abuukar.
Boosaaso, Mar 23 2017-Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii xulashada Daljir ee Maanta waxaana barnaamijka xarunat Daljir ee Magaalada Boosaaso kasoo jeedinaysa Faadumo Abuukar Xulashada Daljir waxaa idiin sahasha...
Boosaaso, Mar 23 2017-Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida oo aad subax walba ka maqashaan xarumaha Daljir ay kuleedahay Soomaaliya, waxaana xarunta Daljir Boosaaso kasoo jeedinaya Ax...
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Axmed Sh Maxamed Tall man.
Boosaaso, Mar 23 2017-Halkaan ka dhagayso barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir, waxaa barnaamijku caawa idinkaga imaanayaa magaalada Boosaaso waxaana idinla socodsiinaya wariye Axmed Shiikh Maxamed Tallman, waxaad b...
DHEGEYSO-Madaxweynaha Puntland oo dalka ku soo laabtay iyo mashaariic la bilaabayo.
Garoowe, Mar 22 2017-Madaxweynaha dowldda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Garaowe ee caasimadda Puntland, kadib markii uu soo gabagabeeyay socdaalkiisii dibada.
Waa kuma ra'iisul wasaare ku-xigeenka magacaaban ee Soomaaliya.
Mudane Avv Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) waa Aabe leh xaas iyo 7 caruur ah. Waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sannadkii 1973, waxbarashadiisii hoose, dhexe, iyo Sare waxa uu ku soo qaatay magaalada Hargeysa.
DHEGEYSO-Farriin noocee ah ayuu madaxweyne Farmaajo u diray barlamaanka.
Muqdisho, Mar 22 2017-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in uu xildhibaanada Baarlmaanka Soomaaliya uu kula dardaarmaayo in ay Ansixiyaan Wasiirada cusub ee uu soo ...
Danjire Micheal Keating oo ammaanay doorka haweenka ee xukuumadda cusub.
Muqdisho, Mar 22 2017-Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee Soomaaliya ayaa lagu ammaanay golaha wasiirada ee uu shalay magacaabay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
DHEGEYSO-Roob ka guga oo ka curtay qaybo kamid ah gobolada Puntland.
Waaciye, Mar 22 2017-Deegaamo badan oo katirsan gobolada, Awdal, Sanaag, Bari iyo Karkaar ayaa waxaa laga soo sheegayaa roobab ay dadka iyo duunyaduba ku diirsadeen.
Madaxweynaha Puntland oo saaka ku wajahan magaalada Garoowe.
Garoowe, Mar 22 2017-Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo mudooyinkii ugu dambeeyey safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa saaka ku soo wajahan magaalada Garoowe.
Wacaal Darray ah
DHEGEYSO-Farriin noocee ah ayu...
Danjire Micheal Keating oo amm...
DHEGEYSO-Roob ka guga oo ka cu...
Madaxweynaha Puntland oo saaka...
Maamulka Galmudug oo hambalyo ...
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay halkaan uga diraysaa hambalyo iyo bogaadin Wasiirada Cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xassaan Cali Kheyre uu soo xulay.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iy...
Boosaaso, Mar 22 2017-Kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii subaxnimo ee Saaka iyo dunida, waxaana xarunta Daljir Boosaaso ka soo jeedin doona Cabdixakiin Xuseen Xasan.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iy...
Boosaaso, Mar 22 2017-Kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii cawaysnimo ee caawa iyo Daljir waxaana xarunteena magaalada Boosaaso ka soo jeedinaya Cumar Laki Man.
Muuqaalka oo dhan
Guulayso oo Gargaar: KA QAYBQAADO DIB-U-DHISKA CISBITAALKA GUUD ee Gaalkacyo. La xiriir Guddiga Dhaqaale Arurinta Cisbitaalka. La qaybso Saaxibadaa!
Sheeko loogu magac-daray [Waaban Mayno]
Waa kumma Aamiin Caamir (Amin Arts)
Daawo: Documentary Xiiso badanTaariikhda Puntland 17 Sanno Kaddib 2015 By: Koor Films
XUSEN SHIRE & LAKI HAJI WACAYS XUBI SOO LUG GOAY 2016
Ogaysiis & Xayaysiis
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Jamaal Faarax Aadan.
Wareysiga madaxweyne Gaas oo dhammaystiran
FARRIINTA GURMADKA ABAARAHA PUNTLAND.
Dhagayso Banaamijyo Gaara
Dhagayso ARDAA 02-0011 Warkii oo dhan
Banaadir Koonfur Galbeed
Galgaduud Iyo Hiiraan
Waad mahadsantihiin dhamaan meelaad jogtan shaqalaha daljir.bac...
mursal cabdi daad oo jooga bosaao anigoo ah mursal cabdi daad oo jooga bosaso dadayduna tahay 22 sano waxaan halkaan ...
Riyaad omar mohamad
Magcaygu waa Riyaad Omar Mohamed waxan ku nolahay magalada vean casimad dalka usta...
Magacaygu Mr. JEY oo jooga Boosaaso waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijyada idaac...
KAYDKA WACAAL DARRAY AH
KAYDKA Banaamijyo Gaara
2016 Daljir™ All rights reserved. Developed by MARAAZ